Kungani i-J-147 Yaziwa Njengomuthi Ongcono Kakhulu Wokwelapha Izifo Ze-Alzheimer Nokulwa Nokuguga?
Kungani i-J-147 yaziwa njengomuthi ongcono kakhulu wokwelapha isifo i-Alzheimer kanye nokulwa nokuguga?
J-147 impushana yaba khona ngonyaka we-2011 eCellular Neurobiology Laboratory yeSalk Institute. Kusukela yasungulwa, kube nezifundo eziningi eziqinisekisa ukusebenza kwayo kahle ekwelapheni isifo i-Alzheimer's kanye nokubuyisela emuva inqubo yokuguga.
Ukutadisha nokucwaninga kwalesi sidakamizwa kugxile ekubalulekeni kwayo ekuphathweni kwe- I-Alzheimer's isimo. Kodwa-ke, abasebenzisi abanempilo babe nentshisekelo kuzinzuzo ze-J-147 njengokuthuthukisa inkumbulo, ukukhulisa amandla okufunda, nokuvuselelwa kwama-neurons.
I-J-147 powder kuvela ku-curcumin naku-Cyclohexyl-Bisphenol A. Isidakamizwa esihlakaniphile sinezici zombili ze-neuroprotective ne-neurogenic. Ngokungafani nama-nootropics amaningi, ukulwa nokuguga kwe-J-147 ukwengeza ithuthukisa ukuqonda ngaphandle kokuthinta ama-enzyme e-acetylcholine noma i-phosphodiesterase.
Indlela yokusebenza ye-J-147 futhi kuzokwengeza amazinga ama-neurotransmitter ahlukahlukene afaka i-NGF ne-BDNF. Ngaphandle kwalokho, isebenza kumazinga we-beta-amyloid, ahlala ephakeme kakhulu phakathi kweziguli ezine I-Alzheimer's nokuwohloka komqondo.
Imiphumela ye-J-147 ifaka phakathi ukunciphisa ukuqhubeka kwe I-Alzheimer's, ukuvimbela ukusilela kwememori, nokwengeza ukukhiqizwa kwamaseli we-neuronal.
Ukuthatha J-147 ukulwa nokuguga izidakamizwa zizophinde zithuthukise inkumbulo, umbono, nokucaca kwengqondo.
I-J-147 isiza iziguli ezine-Alzheimer's ngokwehlisa ukuqhubeka kwesimo. Isibonelo, ukuthatha ukwengeza inciphisa amazinga we-beta-amyloid encibilikayo (i-Aβ), okuholela ekungasebenzi kahle kwengqondo. Ngaphandle kwalokho, i-J-147 curcumin modulates signaling neurotrophin ukuqinisekisa ukusinda kwe-neuronal, ngakho-ke, ukwakheka kwememori nokuqonda.
I-J-147 nootropic kuvimbela ukufa kwe-neuronal ngenxa yokuxineka kwe-oxidative.
Ukuguga kunesibopho sokwehla kwe-mitochondria ngenxa yokungasebenzi kahle nokwanda kwezinhlobo zomoya-mpilo ezisebenzayo. Noma kunjalo, Isengezo se-J-147 ilwa nale ndlela ngokuvimbela i-ATP5A synthase. Izifundo eziningi zibala kumuthi wokwandisa impilo yomuntu.
Ukuguga kuhlotshaniswa nokwehla kokuqonda kanye nokuphazamiseka kwe-neurodegenerative. Noma kunjalo, eziningana Okuhlangenwe nakho kuka-J-147 qinisekisa ukusebenza kwezidakamizwa ekubuyiseleni emuva inkumbulo, ukwenza ngcono amakhono okuqonda, nokwelapha ukuwohloka komqondo, I-Alzheimer's, nezinye izifo ezihlobene nobudala.
Umthamo ojwayelekile wansuku zonke we-J-147 uphakathi kuka-5mg no-30mg. Ungahlukanisa ifayili le- Isilinganiso se-J-147 zibe zibili. Ngokuncanyelwayo, umthamo wakho kufanele ube sezingeni eliphansi futhi uwukhulise ngokususelwa ekubekezeleleni komzimba wakho.
Abaphenyi basebenzise i-10mg / kg yomthamo we-J-147 ukwelapha I-Alzheimer's isifo kumamodeli wegundane.
In Izilingo zomtholampilo ze-J-147, izihloko zazizothatha umthamo ngokushesha ngemuva kokuzila ubusuku bonke kwehora eli-8.
Ukwengeza nge T-006 cishe izinyanga ezintathu kuzonciphisa inkungu yobuchopho futhi kukhuphule amandla wonke. Ngaphezu kwalokho, impuphu inyusa amandla okukhuluma futhi yenze umsebenzisi abe nozolile. Ngokuphambene nalokho, okuhlangenwe nakho kwe-J-147 kufaka phakathi inkumbulo ethuthukisiwe, umbono, nephunga.
Awekho amarekhodi okuphikisana Imiphumela ye-J-147 kuzo zombili izivivinyo zangaphambi kokuqonda nezabantu.
Ekupheleni kokuvivinywa komuntu, ososayensi kufanele basungule umphumela ngokuya ngemiphumela emibi, ukushaya kwenhliziyo nesigqi, izinguquko zomzimba, kanye Izinzuzo ze-J-147 ohlelweni lwezinzwa.
Singayitholaphi i-J-147 powder?
Ukuba semthethweni kwale nootropic kuseyithambo lombango kepha ngeke kukuvimbe ekutholeni imikhiqizo esemthethweni. Ngemva kwakho konke, I-J-147 Alzheimer's ukuhlolwa kwemitholampilo kuyaqhubeka. Ungathenga i-powder ezitolo eziku-inthanethi njengoba uthola ilungelo lokuqhathanisa amanani we-J-147 kubathengisi abahlukahlukene. Kodwa-ke, kufanele uqiniseke ukuthi uthenga kusuka kubahlinzeki abavumelekile ngokuhlolwa okuzimele kwelabhoratri.
Uma ufuna ezinye J-147 iyathengiswa, ngena esitolo sethu. Sinikezela ngama-nootropics amaningi ngaphansi kokulawulwa kwekhwalithi. Ungathenga ngobuningi noma wenze ukuthenga okukodwa ngokuya ngomgomo wakho we-psychonautic. Qaphela ukuthi, intengo ye-J-147 inobungane kuphela uma uthenga ngobuningi.
ILapchak, AP, iBombien, R., neRajput, SP (2013). I-J-147 i-Novel Hydrazide Lead Compound Yokwelapha I-Neurodegeneration: I-CeetoxTM Ukuhlaziywa Kokuphepha kanye neGenotoxicity. Ijenali yeNeurology neNeurophysiology.
ULejing, uLian., Et al. (2018). Imiphumela efana ne-anti-depressant ye-Novel Curcumin Derivative J147: Ukubandakanywa kwe-5-HT1A I-Neuropharmacology.
1.J-147 Ukubuka konke
2.Yini i-Nootropic J-147 Powder?
3. Isebenza Kanjani i-J-147?
Izinzuzo Ezingaba khona ze-J-4
5.J-147 nokulwa nokuguga
6.Izinga Elivamile le-J-147
7. Umehluko phakathi kuka-J-147 no-T-006
Ngabe i-J-8 iphephile uma usebenzisa?
Isivivinyo somtholampilo i-J-9
Ukubuyekezwa komsebenzisi / okuhlangenwe nakho ngemuva kokusebenzisa i-J-10
11. Singayitholaphi i-J-147 powder?